” ရုပ်ရှင်လောကမှာ ခွဲမရအောင် အတွဲညီခဲ့တဲ့ ကိုသားကြီးကို သတိတရ တမ်းတလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး “ – Cele Gabar
“မေမေဆုပန်ထွာနဲ့အတူ “ဗောဓိညောင်ပင်တော”မှာ တံမြက်စည်းလှည်းကုသိုလ်ယူနေတဲ့ သားလေး Roar Roar “
“ငွေယိုပေါက်တွေများနေတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပွဲကြမ်းနေတဲ့ သုသု”
“ဖြုံဘူးရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ရိုးသားပြီးဖော်ရွှေမှုကြောင့် ဖြုံဘူးရွှာမှာ အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ ရွှေကစ်လေး”
မန္တလေးမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ပြီးစီးသွားတာကြောင့် ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတော့မဲ့ အလင်းရောင်
“စကားပန်းတို့ပွင့်ရာ ပုပ္ပါးမြေမှာ အနေကြာလို့ ပုပ္ပါးသူလေးဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ မခိုင်လေး”
“စန္ဒယားကို ကိုယ်တိုင်တီးပြီး “ထာဝရမန္တလေး “ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းကို သီဆိုပြခဲ့တဲ့ အောင်ထက်”
“မင်းသားချော နေတိုးနဲ့ မိုးတို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံကာ သရုပ်ဆောင်ပုံဖော်မဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကြီး”
” (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းစကားပြောပေးခဲ့တဲ့ မိုးယုစံသားလေးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် “
“ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဖွားကို ရည်စူးပြီး ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ လူမင်း”
” ရုပ်ရှင်လောကမှာ ခွဲမရအောင် အတွဲညီခဲ့တဲ့ ကိုသားကြီးကို သတိတရ တမ်းတလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး “
နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တခေတ်တခါတုန်းက အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ပရိသတ် အားပေးမှု အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ ကြော်ငြာဘုရင်မ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို နှစ်အတော်ကြာရပ်နားပြီးနောက်လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ထက်ထက်ကို ယနေ့အချိန်ထိ အားပေးပြီး ချစ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး နေကောင်းပျောက်ခါစမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပွဲတက်တွေကို အရင်ကထက်ပိုဆက်တိုက်လုပ်တော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒွေး(ကိုသားကြီး)က ချစ်တဲ့သူတွေကိုခွဲခွာသွားတဲ့နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ထက်ထက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ဒွေးကို သတိရတမ်းတမိကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်နဲ့ ဒွေးတို့ဟာ (၁၉၉၀) နဲ့ (၂၀၀၀ ) ဆယ်စုနှစ်အစောပိုင်းလောက်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ဈေးကွက်နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကြော်ငြာ အတော်များများကို အတူတူလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အနုပညာစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရဲ့တီဗီကြော်ငြာပုံရိပ်တွေဟာလည်း ယနေ့အချိန်အထိပရိသတ်ရဲ့  ရင်ထဲစွဲထင်ကျန်ရစ်ဆဲပဲ ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကားအတော်များများကိုလည်း လိုက်ဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အထင်ရှားဆုံးဇာတ်ကားတွေကတော့ နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက် ၊ လျှို့ဝှက်ရင်ခုန်သံ ၊ မောင့်မူပိုင်ရှင် ၊ အချစ်ဆိုသောအရာ ၊ ရင်ထဲမှာဘာညာဘာညာ ၊ငှက်ကလေးရဲ့ဒဏ္ဏာရီ ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်မြားနှစ်စင်း၏ ချစ်ခြင်းဆုံမှတ် တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ထက်ထက်ကတော့ သူနဲ့အတွဲညီခဲ့တဲ့ ကိုသားကြီး အတွက် သတိတရနဲ့အမှတ်တရ ကြော်ငြာပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်သလိုကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုသားကြီးကို သတိတရ တမ်းတနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရော (၁၂)ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကို သတိရရဲ့လားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source:Htet Htet Moe Oo Only
” ရုပျရှငျလောကမှာ ခှဲမရအောငျ အတှဲညီခဲ့တဲ့ ကိုသားကွီးကို သတိတရ တမျးတလိုကျတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး ”
နိုငျငံကြျောပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျထကျထကျမိုးဦးကတော့ တခတျေတခါတုနျးက အရမျးနာမညျကွီးခဲ့ပွီး ပရိသတျ အားပေးမှု အပွညျ့အဝ ရရှိထားတဲ့ ကွျောငွာဘုရငျမ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလုပျငနျးတှကေို နှဈအတျောကွာရပျနားပွီးနောကျလကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို ပွနျလညျလုပျဆောငျနတေဲ့ ထကျထကျကို ယနအေ့ခြိနျထိ အားပေးပွီး ခဈြနတေဲ့သူတှေ အမြားကွီး ရှိနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့ဆေးရုံတကျခဲ့ရပွီး နကေောငျးပြောကျခါစမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ပှဲတကျတှကေို အရငျကထကျပိုဆကျတိုကျလုပျတော့မယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
ဒီနဟေ့ာ ပွညျသူ့အခဈြတျော မငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ဒှေး(ကိုသားကွီး)က ခဈြတဲ့သူတှကေိုခှဲခှာသှားတဲ့နေ့ တဈနဖွေ့ဈတဲ့အတှကျ ထကျထကျကိုယျတိုငျကလညျး လုပျဖျောကိုငျဖကျဖွဈတဲ့ ဒှေးကို သတိရတမျးတမိကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတာဖွဈပါတယျ။ထကျထကျနဲ့ ဒှေးတို့ဟာ (၁၉၉၀) နဲ့ (၂၀၀၀ ) ဆယျစုနှဈအစောပိုငျးလောကျက မွနျမာ့ရုပျရှငျသမိုငျးမှာ ဈေးကှကျနဲ့ မွနျမာ့စီးပှားရေးကွျောငွာ အတျောမြားမြားကို အတူတူလကျခံရိုကျကူးခဲ့ရတဲ့ အအောငျမွငျဆုံးလုပျဖျောကိုငျဖကျ အနုပညာစုံတှဲဖွဈပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျရဲ့ရဲ့တီဗီကွျောငွာပုံရိပျတှဟောလညျး ယနအေ့ခြိနျအထိပရိသတျရဲ့ ရငျထဲစှဲထငျကနျြရဈဆဲပဲ ဖွဈပွီး
ရုပျရှငျကားအတျောမြားမြားကိုလညျး လိုကျဖကျညီညီသရုပျဆောငျခဲ့ရာ အထငျရှားဆုံးဇာတျကားတှကေတော့ နှဈယောကျတဈအိပျမကျ ၊ လြှို့ဝှကျရငျခုနျသံ ၊ မောငျ့မူပိုငျရှငျ ၊ အခဈြဆိုသောအရာ ၊ ရငျထဲမှာဘာညာဘာညာ ၊ငှကျကလေးရဲ့ဒဏ်ဏာရီ ၊ ဆနျ့ကငျြဘကျမွားနှဈစငျး၏ ခဈြခွငျးဆုံမှတျ တို့ပဲဖွဈကွပါတယျ။ထကျထကျကတော့ သူနဲ့အတှဲညီခဲ့တဲ့ ကိုသားကွီး အတှကျ သတိတရနဲ့အမှတျတရ ကွျောငွာပုံရိပျလေးတှကေိုပွနျလညျဖျောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈသလိုကှယျလှနျခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ ကိုသားကွီးကို သတိတရ တမျးတနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ CeleGabar ပရိသတျကွီးရော (၁၂)ပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ ကှယျလှနျခွငျးအထိမျးအမှတျကို သတိရရဲ့လားဆိုတာမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ နာမည်အရင်းဖြစ်တဲ့ ” အောင်ထွန်း ” ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင်ရရှိလိုက်တဲ့ ပြေဇင်
“အမျိုးသားသုံးဦးရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ရွေးချယ်ရချက်စေမဲ့ မိန်းမလှလေး မိုးနှောင်း အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်လေး”
“ငွေယိုပေါက်တွေများနေတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးကြောင့်…
“စန္ဒယားကို ကိုယ်တိုင်တီးပြီး “ထာဝရမန္တလေး “ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့…
” (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းစကားပြောပေးခဲ့တဲ့ မိုးယုစံသားလေးရဲ့…
ချစ်သူမောင် သားဂန်း ကိုယ်တိုင် တီးခတ်ပေးတဲ့ ဂစ်တာသံစဉ်လေးနဲ့ပရိသတ်တွေကို…
1.4M Likes Like our page
1,068 Subscribers Subscribe
Articles of the day!
လပြည့်နေ့မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘော်ဒါသစ်လေးတွေရရှိသွားတဲ့ ၀ီလျှံထွန်း
Dar Dar	 Jul 16, 2019
ချစ်သူမောင် သားဂန်း ကိုယ်တိုင် တီးခတ်ပေးတဲ့…
Chit Thae May	 Jul 16, 2019
Chit Thae May	 Jul 17, 2019
“ပြည်သူလူထုကို စားစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာအပြည့်နဲ့…
အလှမယ် ရွှေအိမ်စည်ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ AR-T ရဲ့…
” နွားချီးကျုံးရင်းTikTok ဆော့ခဲ့တဲ့ ဖြူ ဖြူထွး…
“ထွက်ရှိပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှု့သူ…
ရိုးရိုးသားသား ဆေးကုသပြီးရရှိထားတဲ့ ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)နဲ့ ကျေးဇူးရှင်…
© 2019 - Cele Gabar. All Rights Reserved.